Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Villa Elisabeth
Raharaha Villa Elisabeth
Any amin’i Serge Zafimahova ny fanalahidy
Naresaka tato anatin’ny hadimiana eo izao ny Raharaha Villa Elisabeth, dia ilay trano natolotry ny fitondram-panjakana hitoeran’ny Pr Zafy Albert mivady, noho izy manana ny sata maha-filohampirenena teo aloha azy.
Tamin’iny herinandro iny no nanomboka nahoraka ny vaovao fa « nisy nivarotra ny « Villa Elisabeth ». Dia niantefa avy hatrany tamin’ny fitondrana ankehittiny ny sain’ny maro. Ny sabotsy teo anefa dia navoakan’ny gazety namana sasany fa « tamin’ny taona 2014 no nahavitan’ny fifampivarotana »
Satria moa saika gazety mpiaro anjambany ny mpitondra ankehitriny no tena namoaka an’io antontan-taratasy io, dia notondroin-dry zareo fa « ny fitondrana tetezamita no nivarotra an’io tanàna io ». Te hanilika ny andraikitra any amin-dry Andry Rajoelina izay filohan’ny tetezamita tamin’izany ry zareo. Heverina fa hanana ny hambarany koa momba an’izany ry Andry Rajoelina.
Ny hita tokoa aloha dia ny Praiminisitra Lefitra misahana ny fanajariana ny tany tamin’izany andro, dia Ingahy Reboza Julien, no nanao sonia an’ilay antontan-taratasy. I Reboza Julien izay tsy hafa taorian’ny vanim-potoanan’ny tetezamita fa lasa mpikambana ao amin’ny foiben’ny Hvm, ary mitetika ny hotendrena ho masoivohom-panjakana malagasy any ampitan’ny ranomasina amin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao.
Etsy ankilany, ny ministeran’ny vola koa tamin’izany andro dia tsy ho afa-bela amin’izy io satria isan’ny re fa nahita maso an’io fifampivarotana io tamin’izany fotoana ny minisitry ny vola ankehitriny, izay sekretera jeneralin’ny ministeran’ny vola tamin’izany. Ny dikan’izany koa dia tsy ho afa-bela amin’io koa i Hery Rajaonarimampianina satria izy no minisitry ny vola tamin’ny fotoana nifampiraharahana tamin’izy io.
Inona izany no marina ?
Ny Fianakaviana Zafy Albert aloha dia efa nanamarika fa i Serge Zafimahova ihany no mpitondra tenin’ny Fianakaviana Zafy Albert. Inoana fa mahafantatra zavatra maro momba an’io fifampivarotana ny « Villa Elisabeth » io i Serge Zafimahova. Izy izay re fa hitafa amin’ny mpanao gazety ato aho ato.
Ka raha hitafa amin’ny mpanao gazety ihany i Serge Zafimahova dia takian’ny lalànan’ny mangarahara ny hamakiany ambatolampy ny zavatra fantany momba io raharaha io, indrindra ireo manam-pahefana ara-panjakana voasaringotra amin’ity raharaha ity.
Etsy ankilan’io, nisy fotoana nahatsiarovan’ny olona sasany fa efa nisy ny nampahatsiahivan’ny Pr Zafy Albert fa « efa ela, tany amin’ny taona 2007 tany no notsiriritin’olona io tanàna misy ny Villa Elisabeth » io, ary niantso mpanao gazety teny an-toerana mihitsy tamin’izay ny Pr Zafy Albert, nampahafantatra ny fisian’ny olona nametraka tsatoka, toa baorina, ( ???) tao anatin’ilay tanàna. Ny mpanoratra dia nahatsiaro an’izany tsara satria isan’ireo nantsoina nijery izany teny an-toerana tamin’izany.
Ka ankehitriny, heverina fa any amin’i Serge Zafimahova ny fanalahidy momba ity raharaha ity.